Xildhibaanada Caasho Axmed Cabdalla ayaa dhaliishay Ganacsatada Suuqa Bakaaraha ee Magaalada Muqdisho | maakhir.com
Xildhibaanada Caasho Axmed Cabdalla ayaa dhaliishay Ganacsatada Suuqa Bakaaraha ee Magaalada Muqdisho
Baydhabo:- Xildhibaanada Caasho Axmed Cabdalla oo ka mid Xildhibaanada ugu cad cad Dawlada Federaalka Somaliya ayaa maanta warbaahinta ka sheegtay in Xaalada Suuqa Bakaaraha ay sii hurinayaan Ganacsatada suuqaasi Gacanta ku haysa, Xildhibaanad Caasho waxay sheegtay in loo baahan inay Ganacsatadaasi eegaan dhanka wanaagsan.
“Wixii Bakaraha ka dhacay masuuliyadooda waxaa xambaraya ganacsatada ku hoosaasinaya kuwa qaraxyada sameeya daaraha dhadheer ee Bakaarahana ka dhigtay buuro gantaalaha loogasoo rido xarumaha qaranka”ayay tiri xildhibaanad caasho Axmed Cabdalla oo maanta la hadashay saxaafada.
Xildhibanaada Caasha ayaa si kulul waxay shaaca uga qaaday inaanay Dawlada Federaalka Somaliya masuul ka noqon doonin wax alaale wixii suuqaasi ka dhaca e ay Dusha u Tuuranayaan Ganacsatada Suuqaasi Degan oo ay sheegtay inay fan gareeyaan kuwa Qaska iyo Labka ka wada Gudaha Caasimada Somaliya ee Muqdisho.
Mss Caasho ayaa waxay kaloo waraysigeedaasi ku soo qaadatay Hawlaha ay wadaan Ciidamada Dawlada Somaliya ee lagu doonayo in Dalka Nabad lagaga dhaliyo yaya ku til maantay mid hormar fiican ah oo ay ku talaasatay Dawlada Federaalka Somaliya isla markaana ay Ciidamada DFS gacan mir ah ku qabanayaan Cid alaale cidii rabta inay Maja xaabiyaan Nabada Dalka Somaliya.
Dhanka kale waxay Xildhibaanadu ka hadashay Xaalada Gobolka Sanaag oo ay sheegtay inuu ku jiro Gobolada ugu baaxada wayn Dalka Somaliya isla markaana ay ku jiraan khayraad aad u fara badan, iyada oo soo dhawaysay Dawlada Goboleedka Maakhir ee Deegaankaasi inta badan Gacanta ku haysa.
Hadalka Xildhibaanada ayaa ku soo aada xili ay Dagaalo xoogani ka oogan yihiin gudaha Caasimada Somaliya oo ay maalinkasta ku dhintaa Boqolaal Ruux oo rayid ah.
« Idaacada Shabelle ayaa dib loogu soo celiyay qalabkeedii ay dhawaan ka qaadeen Ciidamada DFS
Gudoomiye Xigeenka Rugta Ganacsiga Maamulka Puntland oo xalay ay weerar ku qaadeen Kooxo hubaysan »